Chrome 79 inouya nekuvandudzwa mumapassword uye kuzvitonga kwayo | Linux Vakapindwa muropa
Ini pachangu, ndinoda kutaura zvakawanda nezveFirefox, asi Google dura rewebhu ndiro rinonyanya kushandiswa pasirese, saka nhau dzine hukama dzakanyanya kukosha. Uye ndeyekuti maawa mashoma apfuura yakavhurwa Chrome 79, nyowani nyowani yekuvandudza inouya izere nezvinhu zvitsva. Pakati penyaya dzisinganyanyo zivikanwa, asi pasina kukosha kwakaderera, isu tine huwandu hwese makumi mashanu neshanu dzakagadziriswa kusagadzikana, kunowanikwa ku Iyi link. Pakati pavo pane maviri akanyorwa se "Yakakosha" kukoshesa uye sere se "Pamusoro".
Nezve izvo zvinozivikanwa zvinyorwa, ndokuti, mabasa matsva, inosimbisa zvandaizoenzanisa neiyo Firefox Monitor: seyiyi vhezheni, Chrome ichaongorora mapassword awakachengeta, ichaongorora kana webhusaiti yacho yakambokanganiswa kare uye icharatidza kuti isu tinoshandura password. Chimwe chinhu chitsva chakabatanidzwa mune iyi vhezheni zvakare chine chekuita nekuchengeteka, mune iyi nyaya nePhishing.
1 Chrome 79 inosimbisa
2 Iye zvino inowanikwa kubva pawebhusaiti yako
Chrome 79 inosimbisa
Nyowani chengetedzo sisitimu inoongorora mapassword kana anga akanganisa uye inotiyambira. Iwe unofanirwa kuimisikidza kubva pazviruva uye isu tinofanirwa kuve nemapassword edu akawiriraniswa muakaundi yedu yeGoogle.
Yechokwadi-nguva dziviriro kubva kuna Phishing kana uchishanyira anofungidzira mapeji.
Otomatiki kumiswa kwematebhu ari kumhanya kumashure. Kune avo venyu vanofarira kuve nematafura mazhinji akavhurwa, izvi zvinonakidza kwazvo, nekuti zvichapedza zvishoma zviwanikwa nebhatiri. MUDZIDZO, haufanire kumbomisa tebhu dziri kutamba zvemukati. Basa racho rakadzimwa nekukasira uye rinongogoneswa kubva ku «Mireza»: tinonyora chrome: // mireza / # proactive-tab-freeze uye tinoishandisa.
Nyowani WebXR Midziyo API, ichikubvumidza iwe kunakirwa chaikoicho chaicho (VR) muwebhu browser.
Dhizaini nyowani kuratidza iyo mushandisi chimiro yatiri kushandisa.
Yambiro nyowani kana mapeji eHTTPS aine zvakasanganiswa zvemukati, neimwe HTTP.
Nhoroondo nyowani yemapeji ari mumashure nekumberi mabhatani ebrowser. Yakagadziriswa kubva chrome: // mireza / # kumashure-kumberi-cache.
Mifananidzo inoenderana nePWAs (Progressive Web Applications) pane Android. Kune avo vasingavazive, iyo PWA ndiyo sisitimu iyo Google inoshandisa kugadzira yayo webhu kunyorera. Iwe une rumwe ruzivo nezve ivo mu Iyi link, asi pachangu ndingati ndicho chinhu chandinoda kuti Mozilla iwedzere kuFirefox yavo.
Auto tarisa 'autofocus' hunhu hwakawedzerwa kune chero inotarisisa HTML kana SVG chinyorwa. Kusvika parizvino, zvaingoitika muzvinhu zvishoma.
Chiyero chemufananidzo kana vhidhiyo ikozvino chaverengerwa kubva kuHTML upamhi uye hunhu hunhu. Izvi zvinotendera kuti ishandiswe kumisikidza saizi yayo uchishandisa CSS mutoro usati wapera.
Iyo pfuma font-optical-size Inogadza otomatiki saizi yekuvandudza mafonti uye kuverenga.
Kubva pane iyi vhezheni, machira echitaera anokwanisa kushandisa hunhu hunopokana neiyo runyorwa rwechiratidzo, senge "-", "+", "★" uye "▸".
Meseji yekukanganisa kana module ikakundikana yakagadziridzwa Worklet.addModule (), saka vagadziri vanokwanisa kugadzirisa mashandiro zviri nyore. Zvinyorwa zveScript zvinofambiswa pakati pezvinyorwa hazvichiongororwi panguva yekudzoreredza. Zvinyorwa zverugwaro zvichiri kufambiswa pakati pezvinyorwa, zvisina kuurayiwa, kudzivirira zvingangoitika zvikanganiso zvekuchengetedza zvinokonzerwa nekushandisa zvinhu.
Iye zvino inowanikwa kubva pawebhusaiti yako
Chrome 79 yave kuwanikwa kubva kune yako website yepamutemo yeWindows, macOS uye Linux. Sezvo nemamwe akawanda software kubva kukambani, Google inowanzoburitsa shanduro nyowani dzebrowser yayo zvishoma nezvishoma, zvinoreva kuti zvinogona kutora chinguva kuti vaoneke seyekuvandudza pane mamwe makomputa. Izvo hazviwanzo kutora zvinopfuura zuva, uyezve zvichitarisa kuti muLinux inowedzera iyo yepamutemo repository panguva imwecheteyo yatinoisa iyo browser.
Iyo inotevera vhezheni ichave yatove a Chrome 80 iyo irimo mubeta uye kuti iwe unogona kuyedza nekuirodha pasi kubva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 79 inosvika pamwe nekuvandudzwa mumapassword uye kuzvitonga kwayo
Ubuntu Cinnamon Remix yatove neyayo yekutanga vhezheni